Uku ndiko kuchinja kweiyo iOS 11 Beta 6 (Veruzhinji 5) | IPhone nhau
Uku ndiko kuchinja kweiyo iOS 11 Beta 6 (Veruzhinji 5)
Ichokwadi pakusarudzwa kwayo kwevhiki nevhiki, Apple nezuro yakatisiyira Beta nyowani yeIO 11, yechitanhatu yevagadziri uye yechishanu yevashandisi veRuzhinji Beta. Parizvino pane mashoma anoonekwa matsva kutarisira kubva kune aya iOS 11 preview, asi zvinoita sekunge Apple ichine mamwe maaces kumusoro kwayo sleeve ayo anotishamisa isu neshanduko padanho reiyo interface kuti vanogara vakagamuchirwa, kana kwete.
Uye ndezvekuti nguva dzese kambani painobvisa chimwe chinhu padanho rekugadzira, maitiro evashandisi akapatsanurwa pakati pevaya vanoda shanduko nevaya vanovavenga. Ino nguva kwaive kuchinjika kwemamwe ma icon, hapana chimwe uye hapana chakaderera pane iyo App Store pakati pavo, asi zvakare Mepu. Tweaks kune mamwe ma icon, maficha nyowani, shanduko mumamenyu ... tinokuratidza zvese zvinosanganisira ma gifs kuti ugone kunakidzwa nemifananidzo.
1 Mitsva mitsva uye tweaks
2 Mifananidzo yeAirPods
3 Kutamba pamahedhifoni kana masipika
4 Kuvhura mifananidzo
5 Dzimwe shanduko diki
Mitsva mitsva uye tweaks
Makore gare gare, iyo inomiririra chiratidzo cheIOS inoitika shanduko huru mukugadzirwa kwayo. Kuchengeta bhuruu rayo bhuruu, iyo App Store icon ikozvino iri nyore, kusiya hunhu uhwo hwave nemakore hwakamuratidzira nemutongi, penzura uye bhurasho rinoumba tsamba "A". Mamepu akaitazve shanduko yekushongedza kusvika zvino kuratidza Apple Park nemigwagwa yekupinda. Dzimwe shanduko dzisinganyanyo kuoneka dzauya kune yekuyeuchidza icon, iyo (nekukanganisa?) Yakaratidza madenderedzwa kurudyi pane kuruboshwe, uye izvo zvagadziriswa. Pakupedzisira, chiratidzo chewachi chinoratidza iwo manhamba zvakati kurei.
NaIOS 11, iyo AirPods ichawana mukana wekusiyanisa mbiri-pombi basa paAirPod kune rimwe divi uye kune rimwe divi, nokudaro zvichitibvumidza kuve nemabasa maviri akasiyana nekutepa musoro wedu kaviri. Asi neBeta iyi zvakare Tinogona kuona mutsva nyowani kana tichivhura maAirPod padhuze ne iPhone yedu uye tarisa bhatiri rasara, riine kesi nemahedhifoni anotenderera pachiratidziri.
Kutamba pamahedhifoni kana masipika
Iyo Control Center ikozvino inotiratidza widget ine mutambi kubva kwatinogona kuwana kwete chete zvekutamba zvekudzora asi isu tinokwanisa zvakare kusarudza kwekuteerera kumimhanzi kana isu tine mautaipi asina waya kana mahedhifoni akabatana. Iyo icon yavakawedzera mukona yekumusoro kuruboshwe izvozvi zvakare, kana isina waya yekutamba iri kushandiswa, ichaonekwa ine ruvara rwebhuruu uye ine hupenyu. sezvauri kuona mumufananidzo uyu.
Iyo mifananidzo iyo yatinoona kana tichivhura chishandiso zvachinjawo mune ino iOS 11 Beta 6 iyo inoratidzwa mumufananidzo uri pamusoro. Aya maratidziro mune iyi Beta uye mune iyo iPhone 7 Plus inonwisa mvura, pasina izvo "zvinogumbura" zvakapihwa nemamwe mabhatas. Kune avo vasingavade, vanogona kugara vachivabvisa mukati mekuwanika neiyo "Deredza kufamba" sarudzo.
Dzimwe shanduko diki
Kune zvimwe zvakawanda shanduko izvo zvisinganyatso kuoneka kumushandisi. Zvichida chinonyanya kukosha ndiyo nzvimbo nyowani yebhatani kuti isabate kupenya kwe otomatiki, iko zvino Hazvichaonekwe mukati me "Ratidza uye kupenya" menyu kuti iwedzere kuvanzwa mukati meMenu yekuwanika, mu "Ratidza marongero". Zvakare, kunyangwe zvingave zvisiri zvekupedzisira, Apple yakabvisa iyo hove hupenyu hwehupenyu, ichisiya chete "utsi" kumashure. Kana iwe uchida kuona zvimwe shanduko muIOS 11 teerera kune anotevera mavhidhiyo uko isu tinokuratidza iwe shanduko dzavanounza ku iPhone ne iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Uku ndiko kuchinja kweiyo iOS 11 Beta 6 (Veruzhinji 5)
sezvo ini ndakaisa iyo nyowani iPhone beta nezuro (ndinofunga yaive 5) pandinoyedza kutevedzera iyo foni iyo inotangazve uye hapana nzira yekuidzokorora ..
haha zvishoma iwe hauna zano reiyo iphone haina kuyera cheki iyoyo.
mwana, iri beta… .wakatotengesa mweya wako kuAppel pawakatenga iphone, usanyunyute izvozvi. Uri kuipfekerei?
Iyo HomePod inosvika nekudonhedza muna Zvita, kuwanikwa kweAirPods kuchadzokororwa